सिमल भुवाजस्तो समय - सुसूचित नेपालको चित्र: Onlinepana
मान्छेको अनुहारमा देखिने सवैभन्दा आकर्षक कुरा के हो ? कसैले आँखा भन्लान, कसैले ओठ, कसैले पोक्चे गाला भन्न रुचाउलान । यसरी मान्छे पिच्छे फरक फरक विचार आउन सक्छन् । तर धेरैको भनाइ छ– हँसाइ अर्थात मुस्कानले फ्याँक्ने जादुलाई आँखाको कटाक्षले पनि जित्न सक्दैन, ओठको फर्पmराहटले पनि उछिन्न सक्दैन । त्यो यति जीवन्त हुन्छ, यति सुरम्य हुन्छ कि त्यसले कहाँ कतिलाई लठ्ठ बनाइरहेको हुन्छ, पत्तो हुँदैन । ऐना अगाडि उभिएर मुसुक्क हाँस्नुहोस् त , तपाईंको अनुहार कति लालिमापूर्ण देखिन्छ ।
विद्वानहरु भन्छन्– हँसाइले मान्छेलाई प्रसन्न र तन्दुरुस्त बनाउँछ । हाँस्नु एक व्यायाम पनि हो । दिल खोलेर हाँस्नुस् , तपाईंको मुख, घाँटी, छाती, पेट सबैतिरका मांसपेशीहरु सक्रिय हुन्छन् । हँसिलो मानिसका गाला पनि प्राय सुन्दर र चम्किला देखिन्छन् । अनि खिलखिलाएर हाँस्दा पाचनक्रिया सन्तुलित हुने कुरा पनि प्रमाणित भइसकेको छ । तपाईं फिल्म हेर्दा हाँस्नुहुन्छ । निर्देशकले त्यहाँका नायक, नायिकालाई नै जोकर बनाएर प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ । उसको निर्देशनका पछाडि एउटै अभिष्ट हुन्छ– दर्शकहरु मन खोलेर हाँस्न सकून, रमाइलो मानुन् र आत्मसन्तुष्टि लिएर फर्किउन । तपाईंहरुले सुन्नुभएको हुनुपर्छ– पश्चिमा देशहरुमा हँसाइलाई औषधिको रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । कतिपय देशमा त लफिङ क्लबहरु पनि खुलेका छन् । पेरिसका एक डाक्टरले हँसाएरै रोग ठिक पार्ने आश्चर्यजनका चिकित्सा प्रणाली शुरु गरेको पनि केही वर्ष वितिसकेको छ ।
मुस्कान जसरी प्रकृतिजन्य एउटा शाश्वत गुण हो, मुस्कुराउनु पनि एउटा कला हो । मुस्कानमा सम्मोहन शक्ति हुन्छ । जादु हुन्छ र एउटा अद्भूत आकर्षण हुन्छ । यसले पराईलाई आफन्त बनाउँछ । मित्रहरुलाई अझ घनिष्ट बनाउँछ । स्नेह र आत्मीय देखाउने माध्यम पनि हो मुस्कान । गुत्थ र गमक्क परेको अनुहारमा जतिसुकै क्रिम पाउडर दलेपनि कुनै रौनक देखिदैन । तर विस्तारै विस्तारै मसक्क मस्किदै बोल्न अभ्यस्त मानिसहरु सधैं उज्याला र रमाइला देखिन्छन् । यस्तो किन भएको होला ? भुक्तभोगीहरु भन्छन्– हाँसिरहेको अनुहारमा आत्मविश्वास हुन्छ , सन्तुष्टिको आभा झल्कन्छ । र, त्यही सन्तुष्टिले मानिसको शरीरमा भिटामिनको काम गरिरहेको हुन्छ । अनि त चिन्तित मानिसहरु पनि मुस्कुराउने अभ्यास गर्छन । त्यसैले त पीर, बेदनाहरुलाई मलमपट्टि लगाउने औजारका रुपमा हँसाइको उपयोग गर्ने गरिएको छ । नारायणगोपालले कालीप्रसाद रिजालको बेदनालाई यसरी नै गाइदिएका छन्–
मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्नु पर्‍या छ........ ।
अमेरिकी एक मुटु विशेषज्ञको निष्कर्ष छ– तपाईं एक मिनेट हाँस्नुहोस् , चालीस मिनेट आराम गरे बराबरको स्फुर्ति प्राप्त हुन्छ । एक घण्टा योगासनमा रहँदा प्राप्त हुने उर्जा दश पटक हाँस्नुभयो भने तपाईंको पोल्टामा आउँछ । अनि, चिन्तित भएको बेलामा पनि हाँस्ने र हँसिलो बन्ने अभ्यास गर्नुहोस्– तपाईंको मन फूलजस्तै कोमल बन्नेछ, सिमलको भुवाजस्तै हलुका हुनेछ । आखिर यो संसारमा चिन्तामुक्त पनि त कोही छैन् । रहर र आकांक्षाले मान्छेलाई हरेक क्षण चिन्तित बनाइरहेको हुन्छ । तर, तनावलाई कम गर्ने र निराशासंग पौंठेजोरी खेल्दै आत्मविश्वासी बनाउने अचुक अस्त्र र कला पनि हामीसंगै छ । मुस्कान नै त्यो कला हो, जसलाई हामी विना परिश्रम उपयोग गर्न सक्छौं । आफ्नै दिनचर्याहरु सम्झनुस् र सोच्नुस् त मुस्कानमा कति चुम्बकीय क्षमता छ । विहे हुन लागेकी युवतीलाई संगिनीहरुले जिस्काउँदा उसको अनुहार कति लालिमामय हुन्छ ? आफ्ना प्रिय व्यक्तिका अघि मनमा गुम्सिरहेका मीठा अनुभूतिहरुको पोको फुकाउँदा प्रतिक्रियाका रुपमा लाज र संकोचसहित व्यक्त हुने मुस्कान, खुसी हुँदाको मुस्कान, सन्तुष्टिको मुस्कान, कीर्तिमान बनाउँदा आफन्तबाट बधाई र शुभकामनाको धाप खाँदाको मुस्कान– त्यहाँ मनैदेखि एउटा हार्दिक अभिव्यक्ति प्रकट भइरहेको हुन्छ । तपाईं मुसुक्क हाँस्नुहोस् या खिलखिलाएर हाँस्नुहोस् , ओठ बंग्याएर दाँत देखाएर हाँस्नुहोस् या घरै थर्काएर राक्षसी हाँसो हाँस्नुहोस्– जसरी हाँसे पनि तपाईंको प्रसन्नता अभिव्यक्त भइरहेको हुन्छ । त्यसैले त हाँसोलाई संसारका सवै मानिसले बुझ्ने भाषा भनिन्छ ।
तर आजभोलि शहर– बजारका मान्छे यान्त्रिक हुन थालेका छन् । उनीहरु बेफुर्सदी भएका छन् । कतिलाई घरपरिवार, साथीभाइसंग बसेर हाँस्नेसम्म फुर्सद छैन् । तर यो यान्त्रिकताले पनि मुस्कानको महिमामा कुनै असर पु¥याएको छैन । रेडियो, टेलिभिजनमा हास्यप्रधान कार्यक्रमहरु नै किन लोकप्रिय हुन्छन् ? उत्तर हाजिर छ– मुस्कानको आकर्षणका कारण । सौन्दर्य प्रतियोगिताहरुमा भाग लिन उत्सुक युवतीहरु क्याटवाकसंगै मन्द मन्द मुस्कानसाथ दर्शकहरुका अघिल्तिर प्रस्तुत हुने कला पैसा तिरी तिरी सिकिरहेका छन् । यो किन होला ? यसका पछाडि उही मुस्कानको मादकता कै कुरा आउँछ । प्रत्येक मानिसलाई हँसिलो अनुहारले चुम्बकले भैंm तानिरहेको हुन्छ । यस्तो कसरी भएको होला ? मुस्कानभित्रको रहस्यमय र अजेय शक्तिका कारण । र, यी सवै थाहा हुँदाहुँदै पनि हरेक स्रष्टाका लेखनीहरु अभैm सोधिरहेका छन्– आखिर, मुस्कानमा के छ हजुर ?
शनिवार, चैत्र २१ २०७७१२:३३:१३